Izindatshana zikaRick Chavie zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge URick Chavie
URick Chavie waqokwa njenge-CEO ye EnterWorks ngoMeyi 2015. Weza kwa-EnterWorks ngemuva kokusebenza njenge-SVP, iGlobal Solution Management enezinhlamvu kanye neqembu leSAP leCustomer Engagement and Commerce, lapho ahlanganisa khona izinto zedijithali nezomzimba kanye nezimpahla zeCRM zenzuzo yamakhasimende angenamthungo.
UMsombuluko, May 16, 2016 URick Chavie
Ucwaningo lwakamuva luthole ukuthi amaphesenti angama-66 ezindlela zokuthenga eziku-inthanethi afaka nengxenye engokomzwelo. Abathengi bafuna ukuxhumana kwesikhathi eside, okomzwelo okungaphezu kokuthenga izinkinobho nezikhangiso ezihlosiwe. Bafuna ukuzizwa bejabule, bekhululekile noma bejabule lapho bethenga ku-inthanethi nomthengisi. Izinkampani kufanele ziguquke ukwenza lokhu kuxhumana okungokomzwelo namakhasimende futhi kusungulwe ukwethembeka kwesikhathi eside okunethonya ngaphezu kokuthenga okukodwa. Thenga izinkinobho nezikhangiso eziphakanyisiwe ezinkundleni zokuxhumana